RW Itoobiya oo tallaabo Millateri ugu hanjabay Gobolka Tigreeda - Awdinle Online
RW Itoobiya oo tallaabo Millateri ugu hanjabay Gobolka Tigreeda
Rai’sul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa amar ku siiyay militariga dalkiisa in ay gutaan waajibadkooda ah in dalka iyo dadka la badbaadiyo, islamarkana ay tallaabo ka qaadaan gobolka Tigreeda oo ku eedeeyay inay dagaal bilaabeen.
Rai’sul wasaaraha ayaa xisbiga TPLF ku eedeeyay inay weerareen saldhig militari oo ku yaalla gobolka. TPLF ayaa horey waxay ugu eedeeyeen maamulka Abiy in uu marmarsiiyo ka dhiganayo feyriska Corona si uu awoodda u sii hayo maadama waqtigiisu ku ekaa bisha October.
Dowladda dhexe ayaa dhankeeda ku eedeeysay gooni TPLF inay ka dambeeyeen qulqulutooyinka ka dhacay meelo dalka ka mid ah. Sida ay sheegtay shirkadda la socodka xorriyadda internet-ka ee Netblocks- waxaa gobolka Tigreeda ka go’an maanta internetka iyo khadka talefoonada.
Previous articleSoomaaliland oo xukun adag ku riday Milkiilaha Astaan TV
Next articleXOG:- Maxay Somaliland ku eedeysay Milkiilaha Astaan TV?